Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara eriri eriri | Network Meteorology
N'ezie i nuru nke Jehova eriri tiori. Nke a bụ otu n'ime echiche na-akpali akpali n'ụwa niile. Na sayensị a mụrụ ọtụtụ echiche na-agbali ịkọwa ihe kpatara ụfọdụ eziokwu ma ọ bụ nsonaazụ. Agbanyeghị, usoro iwu eriri bụ otu n’ime ihe amara amara na pụrụ iche n’ebe ahụ. Gịnị bụ echiche a n'ezie?
N'ebe a, anyị na-akọwa ihe niile gbasara tiori a na njirimara ya, ka inwee nụ n'ikpeazụ banyere ya ma mara ihe ọ bụ.
1 Ike nke eluigwe na ala
2 Akụkụ nke ụwa
3 String tiori na nkọwa ya
4 Nkọwa nke akụkụ ndị ọzọ
Ike nke eluigwe na ala
Ọ bụ amụma nwere ike ịkọwa ụwa gbara anyị gburugburu. Ebe ọ bụ na a na-echekarị ya gbasara akụkụ nke ụwa a nwere, echere ya na ọ nwere karịa akụkụ atọ. Akụkụ ndị a ma ama bụ obosara, ịdị elu, na ogologo. Agbanyeghị, Eluigwe na Ala nwere akụkụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-akọwa otú ike ndọda si arụ ọrụ ma ọ bụrụ n’ezie Anyanwụ dị anya dịka ọ dị, ọ nwere ike ịdọta thewa.
Ọ bụrụ na enwere ihe nwere oke, ohere ọ dị na ya gbagọrọ agbagọ. Ihe mgbochi ahụ bụ ihe na - ejikọ ike ndọda. Haswa nwere oke ihe ọ bụla ma ya mere na-emekwa ohere. Akụkụ nke oghere bụ ihe na-eme ka ihe na-agagharị. Nke ahụ bụ ịsị, ọ bụ Anyanwụ na site na ike ndọda ya nwere ike ime ka movewa na-agagharị na nke nwere ntụgharị ntụgharị asụsụ.
Ọkà mmụta sayensị na-amasị Albert Einstein na Theodor Kaluza Ha gbalịrị ime ka echiche nke nwere ike ịnakọta ma kọwaa ihe niile dị mkpa na-achị eluigwe na ala. Ya mere a ga-ewere ya dị ka akụkụ dị mkpa nke nwere ike imeghe ụzọ niile. A na-akọwa ike ndọda dị ka usoro nke akụkụ na nrụrụ na oghere na oge. N’ihi ya, a nwara ime akụkụ ọzọ maka ike ndọta.
Ebe ọ bụ na e nweelarị oge iji kọwaa ike ndọda, olee ihe ọzọ nwere ike ịbụ ihe kpatara ike ndọta? Ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọzọ ịkọwa ya, echiche e nwere na enwere akụkụ ndị ọzọ webatara. Nke ahụ bụ, iji kọwaa ike ndọta, a ghaghị iwebata akụkụ ndị ọzọ na mbara igwe. N'ihi ya, eluigwe na ala ga-enwe akụkụ 4 ọ bụghị 3.
Akụkụ nke ụwa
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe akụkụ anụ ahụ 3 yana oge dịka akụkụ nke anọ. Mgbe ị na-etinye usoro ndị ahụ na akụkụ nke anọ, achọpụtara na ihe niile zuru oke, mana ọ pụtaghị na ọ chọta igodo ahụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na enwekwu akụkụ na mbara igwe, gịnị kpatara na anyị anaghị ahụ ya? Ozizi a gha akowa na enwere uzo di iche iche n’elu igwe. Enwere ụfọdụ ndị buru ibu ndị dị mfe ịhụ na ndị ọzọ dị obere ma kpọghee onwe ha.
Obere akụkụ dị ntakịrị n’ogogo na ha anaghị ahụ ya. Anyị enweghị ike ịhụ ha. N’agbanyeghi na-apughi iji anya nke uche ghota ya, enwere ihe omuma atu ndi n’eme ka odi mfe nghota nke anyi apughi ihu.
Ọ bụ ezie na eriri nwere ike ịdị anyị ka ihe nwere akụkụ dị anya n’ebe dị anya, anyị maara na ọ bụghị. USB nwere obosara, ogologo na ogologo, ya bụ, akụkụ anụ ahụ anyị nwere na eziokwu anyị. Otú ọ dị, maka ndanda, Ije ije na eriri USB a nwere akụkụ atọ dị ukwuu.
Echiche nke sayensị Sayensị Klein yiri nke ahụ, mana ọ pere mpe karịa. Ọ bụrụ na anyị bụ obere ndanda, anyị nwere ike ịkwaga obere akpịrịkpa nke oge-wee nwee ike ịhụ akụkụ ndị ahụ. The akụkụ anọgide akpọrepu na ha. Ajụjụ bụ isi, ngwa ndị a ọ na-arụ ọrụ n'ime ụwa n'ezie? Azịza ya bụ mba.
Site na data ndị a, ndị ọkà mmụta sayensị enweghị ike ịnweta data dịka oke nke electron. Ebumnuche bụ inwe ike ịkọwa eluigwe na ụwa site na otu echiche.
String tiori na nkọwa ya
Ndị ọkà mmụta sayensị nke oge a na-ekwu maka ịmara ihe pere mpe, nkewa, na nkewa nke na-adịghị ekewa dị n’ụwa. Ka anyị were ya na anyị nwere bọọlụ bọọlụ. Ọ bụ ezie na a na-eche atom ka ọ bụrụ nke pere mpe nke enwere ike ịhụ, Ndi a mejuputara umu irighiri ihe dika fermions na bosons. Quarks bụ ụdị fermion na proton na-mere. N'agbanyeghị ihe a kwenyere na ya, n'ime mkpọtụ ahụ, anyị nwere ike ịhụ otu obere ike nke na-ama jijiji. Ọ bụ eriri. N'ihi nke a, a maara ya dị ka eriri tiori.
Obere eriri ndị a dị ka nke ngwa egwu ma nwee ike ịma jijiji n'ụzọ dị iche iche. Enwere ike ịsị na ọ bụ akụkụ kachasị mkpa na ụwa niile. Ndido urụk bụ ihe anyị na-ahụ na eluigwe na ala kpamkpam, ebe ọ bụ na ihe niile mejupụtara atọm nke na mejupụtara proton na, n’aka nke ya, quarks, na n’aka nke ya, eriri.
Ozizi a pụziri ịkọwa mmalite nke ikike niile dị mkpa n’eluigwe na ala. Typesdị ume niile ga-enwe ụdọ jijiji ndị a. Iji lee ma ọ bụrụ na arụ ọrụ a, m ga-anwale ha na mgbakọ na mwepụ nwere eluigwe na ala nwere akụkụ atọ. Agbanyeghị, nke a na-arụ ọrụ naanị site n'inwe eluigwe na ala nwere akụkụ anụ ahụ 10 yana oge. Ọ bụrụ na ọ na-esiri ike ichepụta eluigwe na ala nwere akụkụ anọ, chee na 10.
Nkọwa nke akụkụ ndị ọzọ
Ozizi string na-enye anyị ohere ịkọwa ihe na-eme na oghere ojii na ihe mere tupu Ọdịda nnukwu. Ozizi a na-ekwu na Big Bang nwere ike ịbụ nchikọ nke njikọta ụwa niile. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere iji ihe dịka wormholes nwee ike ịga ụwa ọzọ. N'ihi echiche a, anyị nwere ike ịmata etu anyị ga-esi ga eluigwe na ụwa ebe a ga-eme ka ndụ dị ogologo ma ọ bụrụ na mbara igwe anwụọ.
Y’oburu n’inwe nkukota nke Bang Bang ugbua ayi enwegh ume karie nke kari, ị nwere ike iche na ike karịrị akarị n'akụkụ ndị ọzọ.
Ka o sina dị, ọ dịghị mkpa ka ị nwee nkwupụta nke na-agwa anyị ihe niile na-eme n'eluigwe na ala n'ụzọ ahụ, yabụ anyị nwere ike ibi na-enweghị eriri ederede.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ozizi eriri